‘घर त गलकोट’ लोकगीत सार्वजनिक - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
‘घर त गलकोट’ लोकगीत सार्वजनिक
गण्डकी । कलाकार खेम गुरुङको लोकगीत घर त गलकोट सार्वजनिक भएको छ । सानै उमेरदेखि लोक दोहोरी क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विभिन्न प्रतियोगितामा समेत सहभागी बन्ने गरेका कलाकार गुरुङको पहिलो एल्बम युटुबमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
आफ्नै लय, शब्द र सङ्गीतमा गीत तयार पारेका गुरुङले विदेशमा रहँदा जन्मभूमिको मायामा डुबेर गीत तयार पारेको र अहिले सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गीतको म्युजिक भिडियो पनि जन्म गाउँ गलकोटमै तयार गरिएको छ । बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका–९ बास्खोलामा जन्मिएका गुरुङले गीत सङ्गीतमार्फत जन्मभूमिलाई देश विदेशमा चिनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
बिहे गर्दैछन् वरुण धवन ?
बलिउड कलाकारका महँगा कस्ट्युम्स सुटिंगपछि के गरिन्छन् ?
श्रीमानभन्दा जेठी छन् बलिउडका यी अभिनेत्री
अनुष्काको छोरीको जन्मपछि भाइरल भयो तैमुरको मिम (मिमसहित)